Ukuthenga ii-Tempur-Pedic Bed Sheets - Iishiti Zebhedi
Ukuthenga ii-Tempur-Pedic Bed Sheets
Amashiti ebhedi e-Tempur-Pedic enziwe ngokukodwa kwiimatrasi ze-Tempur-Pedic ukuqinisekisa ukulunga okufanelekileyo. Abanini bematrasi beTempur-Pedic bagqabaza ngelithi amanye amaphepha awaboneleli ngekona okanye ikhuselekile kwikona efanelekileyo.
Ukufumana i-Tempur-Pedic Bed Sheets
Eyona ndawo unokufumana kuyo amaphepha omatrasi wakho we-Tempur-Pedic yi I-Tempur-Pedic Ivenkile ye-Intanethi. Iiseti ziyafumaneka ngamawele, amawele amade, aphindwe kabini, ukumkanikazi, ukumkanikazi oqhekezayo, inkosi, ukwahlula ukumkani, inkosi ye-CA kunye nokwahlula ubungakanani bokumkani we-CA
Dora uMhloli wezokulala
Amakhwenkwe Izinto Zokulala
Izinto zokulala eziMibalabala
Iiseti zephepha zibandakanya:
Imigangatho emiselweyo: Ishidi elinye elifanelekileyo, iphepha elisicaba kunye neemeko ezimbini zomqamelo zibandakanyiwe.
Iiseti zamawele: Ishidi elinye elifanelekileyo, iphepha elinye elisicaba kunye nomqamelo omnye obandakanyiweyo.
Yahlula iiseti: Amaphepha amabini afakelweyo, iphepha elinye licabalele kunye namatyala amabini omqamelo afakiwe.
I-Tempur-Pedic ibonelela ngeeseti ezine zebhedi. Unakho nokuthenga ii-pillowcases ezongezelelweyo ngokukodwa.
Iphepha elidityanisiweyo leCotton Sheet
Olu seto lwenziwe nge-100 yeepesenti yokutya okomileyo okotyiweyo okwi-single-ply 260 count. I-360 ° iyintshi enye ebophayo kunye neembambo zekona zenzelwe iishiti ezifanelekileyo.
Imibala ekhoyo: Indlovu, isileyiti luhlaza namhlophe
Ixabiso lokusetha iphepha: Malunga ne- $ 70 ukuya kwi-150 yeedola
Ixabiso lepillowcase: Ifumaneka kuphela kwindlovu okanye mhlophe ngobukhulu ukumkanikazi okanye inkosi malunga ne- $ 25 ukuya kwi-30 yeedola kwi-pillowcase
Iphepha lePim Cotton Sheet Set
Amashiti afanelekileyo e-Pima Cotton satin afana ne-310-count count.
Imibala ekhoyo: Iqanda, isafire, umhlophe kunye nomngcunube
Ixabiso lokusetha iphepha: Kujikeleze i- $ 130 ukuya kwi-230
Ixabiso lepillowcase: Ifumaneka kuyo yonke imibala ngobukhulu bendlovukazi okanye inkosi ngeenxa zonke zeedola ezingama-30 ukuya kuma-40 nge-pillowcase nganye
Iseti yePhepha leNkulumbuso yeSmart
Sebenzisa amaphepha afanayo unyaka wonke kunye nalo mxube we-rayon owenziwe ngomqhaphu kunye noqalo.
ikati ejongeka njengengonyama
Imibala ekhoyo: Imibala ibandakanya ihobe elingwevu, i-ecru, isilumko esimhlophe, isanti, isafire kunye nomhlophe
13 'epokothweni: Iwele, amawele amade kunye nobukhulu obuphindwe kabini ziyafumaneka.
13 'kunye ne-16' epokothweni: Ukumkanikazi, ukumkanikazi owohlukeneyo, inkosi, ukwahlukana kokumkani, inkosi ye-CA kunye ne-CA king ziyafumaneka.
Ixabiso lokusetha iphepha: Malunga ne- $ 150 ukuya kwi-240.
Ixabiso lepillowcase: Ifumaneka kuyo yonke imibala yokumkanikazi okanye yobukhulu bokumkani ngeedola ezingama-30 ukuya kuma-40 zeepillowcase
Iphepha le Cotton lase-Egypt
Ukunyaniseka kwe-420-intambo yokubala i-sheet enye ye-Cotton sheet.
Imibala ekhoyo: I-Champagne, ihobe engwevu, ukutshona kwelanga, nomhlophe
Ixabiso lokusetha iphepha: Phantse i-190 ukuya kwi-330 zamaRandi
Ixabiso lepillowcase: Ifumaneka kuyo yonke imibala yokumkanikazi okanye yobukhulu benkosi malunga ne- $ 40 ukuya kwi-50 yeedola ngepillowcase
Ungathenga iiseti zephepha le-Tempur-Pedic kwabanye abathengisi, njenge
Kohl's ineeseti eziPholileyo zeLuxury Sheet ezithengisa phakathi kwe- $ 69 kunye ne- $ 339.
IAmazon ifaka iiseti zebhedi zeTempur-Pedic ezibeka amaxabiso amaxabiso aphantse afane kwiwebhusayithi yeTempur-Pedic.
Iimpawu ezikhethekileyo zeeTempur-Pedic Sheets
Xa uzama ukunciphisa iindleko ngokuthenga amashiti ebhedi emveli, abanye abathengi baye bafumanisa ukuba amashiti aqhelekileyo awahambelani neekona zematrasi zeTempur-Pedic. Ngesi sizathu, amaphepha eTempur-Pedic enziwe ngokukodwa kwiimatrasi zeTempur-Pedic. Iimakhishithi zineempawu ezizodwa zoyilo ezahlukileyo kumashiti ebhedi yemveli.
Ishidi elifakelweyo lenziwe ngentambo yekona encanyathiselwe ukunceda ukubamba iphepha kwimatrasi eguqukayo yememori
Amashiti afanelekileyo afaka i-elastic kuyo yonke indlela ejikeleze iphepha elifanelekileyo ukunceda ukuqinisekisa ukulunga.
Ukubala umsonto kunye noMxholo weLaphu
Xa usenza ukuthenga izinto zokulala, kuya kufuneka usoloko ucinga ngokubala umsonto kunye nomxholo wefayibha wamashiti ebhedi. Iingcali zincoma Iibhedi zamashiti ezinokubalwa kwemisonto ubuncinci imisonto engama-250 nge-intshi nganye yesikwere ukuzinza kunye nokuthamba.
Ubalo oluphezulu lwemisonto alusoloko luguqulela kumaphepha athambileyo. Kuxhomekeke kwisiluka kunye nohlobo lomqhaphu osetyenzisiweyo. Umzekelo, ukubalwa kwemisonto engama-600 eyenziwe ngemicu emifutshane yomqhaphu kuya kuba lukhuni kwaye kubengaphezulu kunombala osezantsi wentambo owenziwe ngefayibha ende yomqhaphu.
Nika ingqalelo ukuluka kwamashiti. A ukuluka kwemvula inokunika ubume obuthambileyo kumashiti, kodwa inokubangela nokuzinza okuncinci. Amaphepha ama-Percale ahlala ixesha elide, nangona engenakho ukuthamba njenge-sateen.
Tshatisa iseti yamaphepha akho amatsha kuyo yonke indibano yakho yokulala. Uza kufumana amashiti e-Tempur-Pedic kwimibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu.
Amaphepha okulala alinganayo
Nokuba uthenge yiphi iishiti zebhedi yeTempur-Pedic, uya kulala ngcono usazi ukuba awuzukuphinda usebenze ebhedini yakho ngentsasa elandelayo. Nangona ama-sheet e-Tempur-Pedic angabiza ngaphezu kwamanye amaphepha, uya kufumana ukulungeleka kunye nokuthuthuzela kuyafaneleka nayiphi na indleko eyongezelelweyo.
Malunga Bantwana Clothing Isikolo Ukhuseleko Uphando Neendlela Abantwana Iincwadi Imiboniso Yeslides Ukukhulelwa Iziqinisekiso
Iselula Phone Plans
Iindidi E Credit Cards
yimalini iwayini esebhotileni
unxiba njani njengama-80s
unxibe ntoni kumtshato waseMexico
Ngaba iposi iqhuba usuku emva kwekrisimesi
indlela yokufaka isaphetha sokuvuya